Thumela ukuthengiswa okushisayo okusha Design SPC Flooring ngokuchofoza kukhiye we-SPC Vinyl flooring
I-Stone Plastic Composite (SPC) flooring, ingxenye eyingqayizivele kakhulu ungqimba lomgogodla oqinile owenziwe kakhulu nge-lime powder. ezinze kakhulu kunamathayili wendabuko we-vinyl. Le nhlanganisela yamatshe epulasitiki iyamelana nokwanda nokuncipha amashumi eminyaka futhi isebenza kahle kwenye indawo umswakama kungaba yinkinga. I-100% engenamanzi engeke igobe noma isonteke.
I-SPC Flooring Ngesandla Esiqinile I-Core Vinyl Flooring
I-SPC isho ukuthi i-plastic composite yamatshe.Ngomgogodla oqinile, kuyisizukulwane esisha sokumboza phansi, ezemvelo kakhulu, ezinzile futhi eziqinile kune-LVT.SPC floor isebenzisa i-PVC esezingeni eliphakeme kanye ne-powder yamatshe yemvelo ngokuchofoza kokukhiya okuhlangene, okungafakwa kalula kokuhlukile izinhlobo zesisekelo saphansi njengokukhonkolo noma i-ceramic noma i-flooring ekhona njll.
Ubuchwepheshe obusha beplastiki yamatshe i-WPC, uhlobo olusha lwesiteji oludumile eYurophu naseMelika alunamanzi, alunamlilo futhi alumelana neze nokugqoka. I-WPC phansi engenamanzi evikela imvelo, ungqimba oluqiniswe i-UV, kanye nopende oqiniswe ngopende we-UV kuzothuthukisa ngempumelelo ukumelana kokugqoka phansi, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana namabala nezinye izinto; okusobala ungqimba wokugqoka, kuthinta ngqo ungqimba oluyisisekelo lokuvikela impilo yensizakalo yepulasitiki, i-coefficient ephezulu Isendlalelo sokugqoka singathuthukisa impilo yenkonzo phansi;
WPC zaphansi Indlu yangasese zaphansi
Izinkuni-plastic board board is a kind of wood (wood cellulose, plant cellulose) njengezinto eziyisisekelo, izinto ze-polymer thermoplastic (amaplastiki) nezinsiza zokucubungula, njll., Kuxutshwe ngokufanayo bese kufudunyezwa futhi kukhishwa yimishini yesikhunta. Izinto zobuchwepheshe obuphezulu eziluhlaza nezimvelo, ezihlanganiswe nokusebenza kanye nezici zokhuni noplastiki, yizinto zobuchwepheshe obusha ezintsha ezinobungani bemvelo ezingabuyisela ukhuni nopulasitiki. Isifinyezo sesiNgisi se-Wood Plastic Composites yi-WPC.
SPC zaphansi Chofoza ehlanganisiwe With Ixpe Esekelwa
Izinzuzo ze-SPC Vinyl Flooring.SPC vinyl iba ngesinye sezitezi ezidume kakhulu ukufaka ngezizathu ezahlukahlukene. Uma ungumnikazi wendlu, umphathi wempahla noma umnikazi webhizinisi, i-SPC vinyl flooring ingaba yindlela enhle yephrojekthi yakho elandelayo!
I gama le-brand:IVERSON
Usayizi wePlangwe:935 * 183 * 4mm 1210 * 183 * 4.5mm / 6mm / 8mm
Ngaphansi: I-EVA / IXP
Design isitayela: Isimanje
Surface Ukwelashwa: Umbala Okulula
Izakhiwo ziyingxenye enkulu ekuhlobiseni ikhaya. Abantu abaningi bakuthola kunzima ukukhetha phakathi kwamathayela we-SPC namathayili e-ceramic. Empeleni, zihlukile ngezindlela eziningi.